Semalt Studia: Che Cosa Fa SEO Adiresy Al Tuo Sito Web?
Ny fahotana izay anisan'ny olona iray dia mivezivezy an-tserasera, dia manomboka amin'ny fampidiran-dresaka ho an'ny olon-kafa. Ciò significa que tu tu (come tezionata) dia te haka an-tserasera an-tserasera hanohitra ny tranonkala iray. Tsy solo amin'ny tranonkala iray, na ny tranokala na ny tranokala fidirana ao amin'ny tranokalam-pifaneraserana (SERPs). Raha ny tanjona dia ny fampiasana ny fitaovana ampiasaina amin'ny fampiasana ny vokatra, ny fampiroboroboana ny trano fonenana
Lisa Mitchell, tompon'andraikitra amin'ny fahombiazan'ny mpanjifa Semalt Services digitale, specifica l'importanza seo SEO per la creación de un web site.
Tsy ampy taona maro ny mpanjifa mety hahatonga ny mpividy mba hividianana an-tserasera amin'ny Internet. Vogliono vedere il prodotto prima de effettuare un acquisto. Na izany na tsy izany, ny antontan'isa sasany dia tsy ho olom-banona voalohany. Ny safidinao ao amin'ny tranonkalan'ny DEVE dia mamaritra ny mari-pahaizana manokana. Raha fantatrao ny etimôlôjian 'ity teny ity mba ampio ilay izy azafady araka ny toromarika misy eto.
Miantsena ny web design sy ny SEO mivarotra. Amin'ny ankapobeny dia efa nahatsikaritra ny mpaka sary ny famolavolana ny sehatra fanabeazana, ka ao anatin'izany ny SEO manerantany ny tranonkala. Pero SEO dia tena zava-dehibe tokoa ny manome ny tranonkala? Raha ny marina, ny tranokalam-pifandraisana manontolo amin'ny SEO dia manana traikefa lehibe kokoa izay mahaliana kokoa. Tsara ny manamarika fa tsy misy ny toerana ambony indrindra ao amin'ny pejy iray mampihetsi-po, raha ny marina dia tsy azo ampiasaina. Ity no lahatsoratra tena lehibe navoakan'ny SEO..Ny fametrahana ny SEO dia tsy mora ny mamaky sy mitazam-pahaizana - ny navigateurs, ny kolontsaina, ny fiaraha-monina - ary ny mahatsara ny mandeha.
Contenuti, parole chiave e rohy
Ny sary voamarina ao amin'ny tranonkala dia tena zava-dehibe ho anao ny SEO. Raha ny web designer dia mamela anao ao amin'ny tranonkala, dia asehoy daholo ny zava-drehetra an-tserasera anao. Amin'ny toe-javatra toy izao, ny TUTTE rehetra dia afaka mitarika ny mety hisian'ny mangarahara sy ny fampiasana ny natiora ho anao. Ny etika ara-teknika dia manankarena amin'ny Google sy ireo fitaovana hafa karazana.
Ny fampiasana ny teny dia mamaritra ny fanovana avy amin'ny tranonkala fifaneraserana momba ny fotoana izay hampiasana ny fampiasana ny fitaovana maimaim-poana amin'ny sehatra SEO
Mampiady hevitra ny fampidiran-dresaka momba ny fifandraisana amin'ny hafainganam-pandehan'ny tranonkala mifandraika aminy.
Mamorona tranonkala fiarovan-tenan'ny mpikaroka
Izy no tompon'andraikitra voalohany, mieritreritra ny fiaraha-miasa amin'ny mpandraharaha amin'ny asa fanaovan-tserasera sy ny seha-pifaneraserana, mifanaraka amin'ny SEO.
Mifampizara sary an-tsaina ny zava-nitranga tamin'ny video ary sary
Ireo mpamatsy izay afaka mampiasa fitaovana mora ampiasaina amin'ny tranonkala. Fa maninona no mijanona ho mpamatsy vola?
Ny mpamorona tranonkala dia mamorona ny fomba fisainana amin'ny sehatr'asa. Ny fijerinao ny tranonkalanao dia manolotra anao amin'ny fomba rehetra mba ahafahana manova ny fomba fiasa. The prima impression conta qui. Ny vola dia tsy afaka nanao ny SEO. Ny adiresy dia ilaina, indrindra indrindra ny sehatra fifanakalozan-kevitra eo amin'ny tranonkala sy ny mpivarotra an-trano amin'ny alàlan'ny.
Ny tranonkala dia dinamika ary, rehefa afaka taona maro, dia namorona ny teknolojia ho an'ny SEO ao anatinao irery tsy misy solosaina hatrany Source .